ChiGerman KPSS 2008 Mibvunzo yeGerman neMhinduro
KPSS 2008 Shona Mibvunzo nemhinduro
2008 KPSS ChiGerman Mibvunzo neMhinduro
Iwe unogona kuwana maGermany ekuongorora mibvunzo uye mhinduro mumutauro wemumwe mutauro weKPSS kuongorora mu 2008 mune .rar archive.
Kubva pane mazita emafaira, zvinonzwisisika kuti ipi iyo faira ibvunzo faira uye iyo firipi inopindura faira.
Iwe unogona kuwana rubatsiro rwakakosha kubva kune vadzidzisi vedu muGermanx ma forum.
Mumaforamu edu, munokwanisawo kutora zvidzidzo zvekugadzirira kwekuongororwa zvakadai seGermany mhuri yekubatanidza kuongorora, Kpss, Uds, Yds, A1, A2, B1, B2.
Mifananidzo iri mu .pdf format, iwe unogona kuzarura uye kuverenga mapeji ekuwedzera kwepdf.Purogiramu yeAdobe Acrobat Reader inofanira kunge iri pakombiyuta yako Kuti udzivirire Adobe Acrobat Reader, tapota shanyira:
Almancax inokushuvira iwe kubudirira muhupenyu hwako hwedzidzo ...
Zentrale Mittelstufenpruefung (Goethe Chitupa C1 -…